Issimada Mudug oo go'aano kasoo saaray shirkoodii ka dhacay Goldogob [Sawiro] - Horseed Media
Issimada Mudug oo go’aano kasoo saaray shirkoodii ka dhacay Goldogob [Sawiro] January 3, 2013 Share this:FacebookTwitterGoogleWaxaa labdii maalmood ee lasoo dhaafay magaalada Goldogob ee gobalka Mudug ka socday kulan ay soo qaban qaabisay xarunta nabadda iyo cilmibaarista ee Geeska Afrika kaasoo ay yeelanayaan Issimada iyo nabadoonada gobalka Mudug oo looga hadlayo arrimaha deegaanka iyo Amniga.
Kulankan ayey ka qeyb galayaan issimada gobalka waxaana magaalada ku sugan nabadoono badan oo ka kala yimid deegaanada kala gedisan ee gobalka. Issimada kulankan ka qeyb galaya ayaa waxaa kamid ah;
Ugaas Cali Ugaas Maxamed, Islaan Bashiir Islaan Cabdule, Suldaan Cabdisalaan Suldaan Maxamuud, Suldaan Maxamed Suldaan Maxamuud Cilmi Calas, Suldaan Cabdirashiid Suldaan Muuse Shire Faray, Suldaan Maxamed Jaamac Shire, Islaan Xasan Cigaal, Suldaan Cabdi Bile Suldaan Warsame, Ugaas Cabdulqaadir Cilmi Filig, Suldaan Axmed Maxamed Cabdulle.
Ajandayaasha Shirka ayaa waxay ahayd Dadka Afduubka loo haysto ee u dhashay Waqooyiga Mudug, Dib u dhiska Kaabayaasha Dhaqaalaha, Iskuxirnaansha Bulshada Gobolka Mudug ee Puntland.
Islaan Bashiir Islaan Cabdulle Islaan Faarax ayaa shirka kalmaddiisa ka jeediyey, Islaan ku wuxuu baaq u diray maamulka iyo shacabka Galmudug isagoo ugu baaqay in dadka shacabka ah ee Afduubka loogu haysto deegaankooda dib loogu soo celiyo Xorriyaddooda wuxuuna sigaar ah baaqa ugu diray maamulka, odayaasha dhaqanka, culimada iyo aqoonyahanka in arrintaas ay qayb wayn ka qaataan.
Islaan Bashiir ayaa sidoo kale ka hadlay in Shirkaan uusan ahaan doonin kii ugu danbeeyey kaasoo noqon doona mid socon doona dadkuna ay ku wada tashadaan wuxuuna Isimadii Shirka fadhiyay ugu baaqay in la qabto Guddigii Shirka sii wadi lahaa.
Islaanka Wuxuu mahadcelin ballaaran usoo jeediyey Suldaan C/salaam Suldaan Maxamuud iyo Xarunta uu madaxda ka yahay ee Xarunta Nabadda iyo Cilmibaarista ee Geeska Afrika oo ahayd Xaruntii maalgalinaysay shirkan, wuxuuna sidoo kale U Mahadceliyey Shirkadda Isgaarsiinta Golis Telecom Somalia oo iyana gacan wayn ka gaysatay qaybta
warbaahinta ee shirka.
Kulanka Goldogob ayaa ah mid la xariira dhanka dhaqanka isla markaana waxaa lagu gorfeenayaa sidii lagu xalin lahaa dhibaatooyinka dhexmara beelaha ku wada dhaqan gobalka Mudug iyo sidii loo heli lahaa isku xirnaan dhanka bulshada ah oo ku aadan ka shaqeynta sugida amniga.
Ugu danbayntii Waxaa shirka soo xiray Ugaas Cali Ugaas Maxamed oo ahaa ugaaskii Martida loo ahaa isagoo ugu horayn bogaadiyey Bulshadii Shirka kasoo qaybgashay gaar ahaan qaybihii safarka ku yimid degmada Goldogob, ugaaska wuxuu sheegay in shirkaan uusan ahayn mid intaas ku eg ee uu noqon doono mid sii socda.
Ugaas Cali ayaa isna mahadcelin iyo ammaan ballaaran u jeediyey Suldaan C/salaam Suldaan Maxamuud iyo xarunta uu madaxda ka yahay ee xaruntan nabadda iyo cilmibaarista ee geeska Afrika iyo shirkadda isgaarsiinta
Golis Telecom Somalia.
Kulankan ayaan lagu casumin cid ka socota maamulka Puntland, balse beelaha gobalka ku dhaqan ayaa ayagu bilaabay inay si hoose u xaliyaan dhibaatooyinka horey gobalka uga dhacay ee sababi kara amni xumada.
Qodobada kulankan ka dhacay ee sida weyn looga hadlay ayaa waxaa kamid ahaa:
- Adkeynta Amaanka iyo wada shaqeynta beelaha ee dhanka Amniga
- Dib usoo nooleynta iyo horumarinta Kaabayaasha Dhaqaalaha ee gobalka Mudug
- Xasilinta xiisadaha sababay Afduubka iyo amni xumada.
Gagabadii kulankan ayaa Bayaan ay Issimada si wadajir ah usoo saareen looga hadlay qodobo ay kamid ahaayeen:
1- In dhamaan laga wada qayb qaato lagana wadashaqeeyo ilaalinta nabadgalyada gobolka iyo midda guud.
2- In la iska kaashado nolosha iyo hor marka ummadda midda guud iyo mida gobolkaba
3- In la ilaaliyo dhaqanka wanaagsan ee ku salaysan shareecada Islaamka dhamaana wixii inaga ba’san loo xaliyo si wadajir iyo walaaltinimo ah.
4- Wuxuu shirku ku baaqayaa is cafis guud iyo isa saamax
5- Wuxuu shirku ku baaqayaa oo la isla qaatay in shirka lasii wado oo aan la joojin ee kani uu noqdo kii bilowga ahaa inta laga gaarayo yoolkii laga lahaa shirka.
6- Wuxuu shirkani ku baaqayaa in la iska kaashado hirgalinta kaabayaasha dhaqaalaha, sida dhismaha wadada Galdogob – Garacad.
7- Wuxuu shirku ku baaqayaa in dadka shacabkaa ee reer Puntland gaar ahaan gobolka Mudug, ee qafaalasho ahaanta loohaysto muddo laba bilood ka badan xuriyadoodii loosoo celiyo sida ugu dhaqsiinyahay badan, ayna fududeeyaan cidkasta oo ay khusayso soodayn doodu gaar ahaan dowladda Puntland ay xil iska saarto soodaynta Shacabkeeda.
8- Waxaa la isku dar-daarmay Alla kacabsi, walaaltinimo iyo Wadajir.
7- In lajoojiyo kala takoorka beelaha wada daga Puntland.